Shabaab oo culeys ku haya Maamulka Galmudug | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shabaab oo culeys ku haya Maamulka Galmudug
Shabaab oo culeys ku haya Maamulka Galmudug
Dhowr iyo toban sano oo Ahlu Sunna ka arrimineysay Gobolada Dhexe waxa uu amnigeedu ahaa mid la isku haleen karo, Shabaab-na aanu cagta soo dhigi karin.
Shabaabka waxay muddooyinkii ugu dambeysay kordhiyeen weerarada ay ka gaysanayaan deegaanada ay Galmudug maamusho.
Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa la fahamsan yahay in weeraradaasi kordheen.
Shabaab waxay Axaddii la wareegeen deegaanada Beergadiid iyo Bacda oo hoos-tagga Magaalada Matabaan, halka Isniintii ay la wareegeen Matabaan qudheeda, iyadoo Ciidamadii Galmudug ee ku sugnaa kastamka canshuuraha ee Matabaan ay aadeen dhinaca Magaalada Guriceel.
Shabaabka ayaa sidoo kale goor dambe oo xalay ahayd la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceeldheere, oo ku yaala waddada xiriirisa Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel.
Ciidamadii Galmudug ee ku sugnaa deegaankaasi ayaa u ruqaansaday dhinaca Magaalada Dhuusamareeb.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen dhowr qarax, oo Shabaabku ku burburiyeen Xaruntii Maamulka iyo Saldhiggii Booliska ee Ceeldheere, sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen Xeradii Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka uu ku lahaa deegaankaasi.
Bishii November ee sanadkii 2019, Ahlu Sunna ayaa Dowladda Federaalka ku wareejisay deegaanadii ay ka arrimineysay muddada dheer, wixiise xilligaa ka dambeeyay xaaladda Galmudug ayaa ahayd mid Allow sahal ah.
Shabaabka ayaa tan iyo xilligaa culeys ku hayay deegaanada Galmudug, iyadoo maanta aanay dadku si caadiya isugu kala gudbi karin magaalooyinka.
Previous articleYaasiin Farey oo kursigiisii loo xalaaleeyay
Next articleLafta-gareen oo kulan gaar ah la yeeshay Madaxweynaha Jubbaland